Kubata: GUI yekumisikidza Touchegg pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Bata iri GUI nyowani yekumisikidza zvakanyanya intuitively muTouchegg. Ndokunge, pakuzivikanwa kwechiratidzo kwema multi-touch mapaneru muLinux. Ichi chirongwa chitsva chinogona kuita kuti Linux desktop ruzivo rive nyore kune avo vari kurishandisa. Touchegg. Chirongwa, icho kana iwe uchirangarira, mushure mekusagamuchira zvigadziriso zvemakore mashanu, izvozvi zvanyorwazve zvakakwana kuti zvikwanise kushanda nehunyanzvi hutsva hunowanikwa paLinux desktop uye nemabasa matsva.
Iyi Anwendung inomhanya nechekumashure, ichichinja kuita kweiyo yakawanda-inobata pani iyo mushandisi inoita nezviito pa desktop ye distro yako. Unogona swipe, pini, wedzera, nezvimwe. Iyo zvakare inobvumidza rutsigiro rwekubata skrini, iyo iwe yaunogona kuita kuwanda kwezviito, kubva kudzikisira hwindo nekutsvedza pasi nezvigunwe zvitatu, kuvhura mukati nekupina neminwe miviri, nezvimwe.
Kuti ugadzire Touchegg uye uigadzirise, vashandisi vaifanira kugadzirisa faira yekumisikidza. Asi izvo zvakapera naTouché, inova yakapusa uye inonzwisisika GUI saka unogona kuzviita nyore. Nenzira iyoyo, unogona kusimba kumisikidza zviitwa zvepasirese uye zvimiro zvetsika zveapp yega yega.
Pakati pe akatsigira zviratidzo Ndizvo:
Rova zvakasimba pamwe 3 kana 4 minwe kumativi ose.
Pinza 2, 3 kana 4 minwe mukati kana kunze.
Bata ne2, 3, 4, kana mashanu zvigunwe zvekubata skrini.
Kana zvakadaro zviito izvo zvinogona kumisikidzwa zvinoenderana nemasaini ndeaya:
Kwidziridza kana kudzorera hwindo.
Chinja yakazara skrini mode.
Dzokorora nzira pfupi kana raira.
Zvese nenzira yakapusa, iine graphical interface yaunowedzera nayo (+) zviitwa zvaunoda. Uye zvakare, kwete chete kumisikidza kuri nyore, asiwo kuiswa kwayo, sezvo yakaiswa mukati se Yese Flatpak package, uye iwe unogona kuitora kune yako yaunofarira distro paFlatHub. Iwe zvakare uchaiwana muDEB, yeDebian-based distros ...
Mamwe mashoko - Bata
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Kugunzva: GUI yekumisikidza Touchegg paLinux